Ngingabhekana kanjani ne-Instagram SEO?
Asikho isidingo sokusungula le platform yocansi ethandwa kakhulu, lapho wonke umsebenzisi angase abe nomuzwa wohlelo lochwepheshe. Lapha kuza u-Instagram ngokwayo, ukuletha izithombe ezingaphezu kwezigidi ezingu-50 ezabelwana ngazo nsuku zonke. Futhi izilaleli ezimile zabasebenzisi ababhalisile ku-Instagram ziqhubeka zanda, njengoba abantu abaningi beqaphela isipiliyoni somsebenzisi esiyingqayizivele, ehambisana nesihloko sokubheka izithombe, futhi ngokuhlanganisa ngempumelelo izingxenye eziphezulu zezixhumanisi ezingcono kakhulu zenhlalo. Yingakho umbono we-Instagram SEO wokugqugquzela amandla we-brand, ukwanda kwe-traffic flow flow, noma noma yimuphi umkhankaso wokumaketha wedijithali wesikhulumi akusikho isiphetho esisha.
Hlanganisa ukuqwashisa okunamandla ngegama lakho lomkhiqizo
Ngokuyisisekelo, i-Instagram inikeza ipulatifomu enhle yabangani ukuthi bahlanganyele izithombe, ukuhlela ngemiphumela ehlukene noma izihlungi, kanye nokulungele ukungena ngemvume ngama-hashtag avumela ukusesha okubhekiswe kuwo wonke umsebenzisi. Ngokuqinisekile noma yikuphi ikhono lokuthwebula izithombe lingatholakala lapha - kusukela ku-selfies namanye amaflaya we-vintage. Lokho kusho ukuba ne-akhawunti yezenhlalo ku-Instagram kungavumela amathuba akho okukhangisa ebhizinisi lakho elibhekene namakhasimende angahle athile ngaphezulu.
Ukuqalisa noma yikuphi i-akhawunti eyimfihlo ku-Instagram kuwumsebenzi olula ngokwemvelo. Noma kunjalo, kufanele ugcine engqondweni izinto ezilandelayo ngaphambi kokungena ebhizinisini. Okokuqala, asikho isidingo lapha sokushicilela kuphela izithombe zekhwalithi ezimele umkhiqizo wakho nsuku zonke. Umqondo oyinhloko wensizakalo wukuthi ukubukeka kwemvelo kunikezwa isithombe, impendulo enamandla cishe engayithola. Ungalokothi usebenze ngendlela esemthethweni, njengoba abasebenzisi bengasoze bakhangwa nalokho. Phakathi kokunye okuvamile okumele ukwenze, njengokucabanga ngezixazululo ezibukwayo nokunye okunjalo, ungakhohlwa ukufaka iphrofayli yakho esanda kudalwa ngokuxhumanisa ngqo ngqo kuwebhusayithi yakho yebhizinisi.
Yisho ukwamukela emincintiswaneni
Ukugcina umncintiswano wesithombe ku-Instagram mhlawumbe indlela elula kakhulu yokuqinisa ubukhona bakho be-inthanethi, khumbula wonke umuntu ohlanganyela emcimbini wakho uqala ngokuzenzakalelayo ukukhuthaza umkhiqizo wakho ngama-hashtag nabalandeli bakhe noma abangani bakhe. Futhi kuwumkhuba omuhle wokuba nenamba ekhulayo yabalandeli. Uma ufaka ama-hashtag, ngincoma ukuthi izilaleli zikwazi imininingwane eyinhloko amasonto ambalwa ngaphambi komcimbi ozayo. Ukuze wenze umncintiswano wakho uhlanganyele ngokwengeziwe, ungafaki ukunikeza umvuzo ozwakalayo ukuze uphethise isenzo sangempela. Ngakho-ke, uzothola ukukhangisa okuncane okuhle ngaphandle kokuchitha ikhulu, ngenkathi ungase uzizwe impilo yangempela nezintandokazi zezilaleli zakho ezibhekiswe kuzo.
Yenza okungaphezulu, uhlanganyele okuningi, nomgwaqo ophilayo uzokhula
Umqondo ophakathi lapha ucabanga ngama-hashtag ku-Instagram njengo-SEO amagama angukhiye namathegi we-meta. Khumbula, i-"SEO Instagram" idinga intshiseko ehlanzekile kanye nobuciko ukuze ihlale ihilelekile ngezihloko zakho eziyinhloko nabalandeli abafanelekayo. Vele ukhokhe isikhathi esanele sokugcina isimiso sokuthunyelwe kokuqukethwe okuthakazelisayo kanye namazwana wempendulo ngokushesha. Asikho isidingo sokukhathazeka - imibhalo yokuqala yombhalo yenza kahle nge-Instagram SEO, njengezinye izindlela zendabuko zokuxhumana. Qaphela, noma kunjalo, ukuthi i-Instagram iyindawo yokuhlanganyela izinkumbulo, hlala usesikhathini nemikhuba yamanje, nemikhiqizo efanelekile noma amasevisi afanelekayo Source .